Ciraaq: Nuri al-Maliki oo xilka baneeyey - BBC Somali
Nouri al-Maliki oo ahaa Rai'sul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay inuu xilka baneynayo si uu fursad u siiyo ninka xilkaasi loo magacaabay Xaider al-Abadi. Wuxuuna sheegay inuu taageeri doono.
Hadal ayuu ka jeediyey telefishanka qaran maalma kaddib markii la magacaabay al-Abadi.
Dhinaca kale Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu baasmariyo qaraar maanta oo Jimca ah, qaraarkaas oo looga gol leeyahay in wax looga qabto tababarka iyo shaqaaleynta kooxda Daacish ay ku soo sameyneyso dagaalyahanada shisheeye.
Qaraarkani ayaa sidoo kale waxa uu taabanayaa kooxaha kale ee ku xiran al-Qacida, waxaa hindisay qaraarkan Dowladda Britein, waxaana looga gol leeyahay in cuna qabateeno loogu soo rogo kuwa tababaraya, maalgalinaya, hubkana siiya kooxdaasi.
Qaraarka ayaa ku baaqaya in laga soo saaro dhamaan dagaalayahanada shisheeye wadamada Ciraaq iyo Suuriya, iyo in xanibaad lagu soo rogo lix shaqsi, oo uu ku jiro afhayeenka kooxda Daacish.